Standard eriri laser ọnwụ igwe
Tube & mpempe akwụkwọ Fiber Laser tingcha Machine
Igwe Mpepu Plasma CNC
Igwe mpempe plasma cnc
Antdị mpempe ụdị cnc
Igwe ịkụ pịlma plasma ọkụ
Igwe ntanye ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ
Gantry pipe efere integrated plasma ire ọkụ cnc igwe
Nrụgide oru Plasme Ire ọkụ CNC Cutting Machine
Iru eru ụlọ ọrụ
Ngwa akachasị ahọrọ maka nkenke
Nhazi-eriri laser ịcha igwe Nkenke machining mkpa nke metal ihe Metallic ihe na-ezo aka dara ihe ma ọ bụ dara ihe tumadi mejupụtara dara ọcha. N'ime ha, gụnyere ọla ọcha, alloys, ihe ndị e ji igwe rụọ pụrụ iche, wdg. Ọganiru ọha mmadụ nwere njikọ chiri anya ...
Gịnị bụ ụdị nke eriri laser ịcha igwe adabara maka mkpa efere ọnwụ?
Nchịkọta mpempe akwụkwọ na-adịghị mkpa anaghị achọ nnukwu ike nke ngwa ngwa, yabụ mgbe ị na-ahọrọ igwe ejiji laser, isi ihe bụ ị paya ntị na arụmọrụ efu. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, igwe ejiji laser nwere oke ọnụ ahịa nwere arụmọrụ siri ike na ogo dị elu, mana ...
Pipe laser ịcha igwe nhazi ọsọ, nnukwu nkenke
A na-akpọkwa igwe mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ nchara ígwè, na obere igwe ịkụcha laser dị iche, a na-eji igwe akụrụngwa laser iji belata ụfọdụ ọkpọ ígwè ígwè. Anyị niile maara na ịcha ígwè nchara ọkpọkọ siri ike ma chọọ v ...
Chịkọta ume ma bulie njem ọzọ-nzukọ Shandong Buluoer nke 2021 zutere ahịa nzukọ ahụ gara nke ọma
Iji nwee ike mejupụta ebumnuche atọrọ nke atụmatụ atumatu a na-eme kwa afọ, tọọ ntọala siri ike maka afọ ọhụrụ nke na-achọ ibido. Na March 1, Buluoer nwere nzukọ nzuko 2021 na nzukọ iyi; Shandong Jubangyuan Group onyeisi oche Mr. Jing Fengguo, General Manager Mr. Sun Nin ...
Site na mmepe na ọganihu nke sayensị na teknụzụ, ndụ ndị mmadụ na-agba ọsọ ọsọ. N'oge a nke ego, ndụ ndị mmadụ na ọrụ ha na-amalite ịchụso arụmọrụ na izi ezi dị elu, na igwe ejiji laser nwere ike izute oke arụmọrụ na nkenke nke variou na-achụ ...
Igwe igwe laser na-agagharị agagharị n'oge ike dị elu
Na 2015, igwe igwe ngbacha igwe 6000W pụtara. N'oge ahụ, ike ahịa dị n'okpuru 3000W ka na-achịkwa ngwa ahịa. N'ime afọ ole na ole, ike nke igwe laser na-esi na 6000W na 8000W gaa 10kW na 12kW, nke yiri ka ọ dị anya. Oge nke ...
Enwere ike iji mgbochi igwe ụgbọ ala tinye n'ọrụ igwe na-egbu laser? Olee ihe dị iche na ha abụọ?
Ozi nchịkọta: The ojiji usoro nke metal laser ọnwụ igwe na ụgbọala antifirizi na-dị iche iche. Automobile antifirizi na-akwado ya ozugbo na oke nha; ebe a ga - agwakọta mgbochi mgbochi maka igwe ọkụ laser maka agbakwunye ma gbakwunye ya dịka ọnọdụ dị iche iche si dị na ...
Laser bee ígwè ike agba egwú steepụ
Nchịkọta ozi: Mgbanwe nke nhazi igwe laser, ụdị nke efere ígwè nwere ike ịhazi ya n'ụzọ enweghị isi dịka ihe achọrọ, nke na-enyekwa ohere ka ukwuu maka imepụta steepụ. Steepụ mere nke laser-ịkpụ ígwè nwere ike ịbụ keugwu? Onye mmebe R ...
Site na mmepe na agam n’ihu nke sayensi na teknụzụ, ndụ mmadụ na - agbakarị ọsọ. Na oge nke ego a, ndụ ndị mmadụ na ọrụ ha amalitela ịchụso arụmọrụ na nkenke, na igwe ejiji laser nwere ike izute oke arụmọrụ na nkenke na-agbaso ...
Ọrụ mmezi nke usoro dị iche iche nke ịkụcha plasma CNC ga-abụ nke doro anya!
Ngwa nke ịkụcha plasma CNC ga-enyere ihe ọrụ aka iji nweta nsonaazụ nhazi ka mma n'oge arụ ọrụ, ọ ga-edo anya na ojiji. Ekwesiri idobe sistemụ igwe ihe ọ bụla mgbe ejiri ya rụọ ọrụ ogologo oge, nke mere na ọ bara uru Na oge ikpeazụ, m ...
Igwe ọnwụ Plasma CNC agbanweela teknụzụ azụ nke igwe ịcha ala ọdịnala!
A na-eji igwe ịkụ plasma CNC eme ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Mmetụta nke igwe ihe ọkụkụ na-egosipụtakarị site na arụmọrụ njikwa ọnụọgụ. Mmetụta ya n'ozuzu dị iche karịa usoro ịkụcha ọdịnala n'oge gara aga. A na-eji ụzọ igwe ihe eji arụ ọrụ dị iche iche Ọrụ ...
N'ozuzu, ihe ndị a nwere mmetụta na ọnụahịa nke igwe ọnwụ CNC
Mgbe anyị zụrụ igwe ọnwụ CNC, anyị ga-akwụ ụgwọ dị ukwuu na ọnụahịa ya, na-enwe olileanya ịzụta igwe ọnwụ igwe dị elu na ọnụ ọnụ, nke bụ ịchụso ego dị oke ọnụ. N'ezie, onye editọ nwere ike ịkụziri gị ụfọdụ ụzọ, nke bụ ịghọta tupu ihe ndị metụtara ...
Adress:Nke 666 Fengnian Av., Mingshui Economic Mpaghara, Zhangqiu District, Jinan City, Shandong, China